रति ८:३९ बजे
न्यूज ब्यूरो, सप्तरी । पसलको ताला फुटाई चोरी गर्ने सप्तरीका तीन आरोपितलाई प्रहरीले आज पक्राउ गरेको छ ।
सिसी क्यामेराबाट महेशको पहिचान भएपछि उनलाई घरबाटै पक्राउ गरी सोधपुछ गर्दा रामदास र सुभाष समेत चोरीमा संलग्न रहेको पत्ता लागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी नायव उपरीक्षक माधवप्रसाद काफ्लेले बताए ।
बजारका दिलिप यादवको घरमा पसलसटर भाँडामा लिई साहले सञ्चालन गरेको मोबाइल पसलबाट विभिन्न कम्पनीका मोबाइल चोरी गरेको आरोपितहरुले स्विकारेको प्रहरीले जनाएको छ ।
सुभाषको घर खानतलासी गर्दा चोरीका १० थान मोबाइल समेत फेला परेको प्रनाउ काफ्लेले बताए । प्रहरीका अनुसार रामदासले चलाउने सिटी रिक्सामा चढेर गएका उनीहरुले पसलको सटरको ताला फुटाई मोबाइलहरु चोरी गरेका थिए ।
सोही सिटी रिक्सामा राखेर ल्याएको मोबाइल सुभाषको कोठामा रहेको खाट मुनी लुकाएर राखेका थिए । प्रहरीले मोबाइलहरुसहित चोरीमा प्रयोग भएको सिटी रिक्सा समेत बरामद गरेको छ ।
चोरी मुद्दा कसुरमा उजुरी दर्ता गरी अन्य अनुसन्धान कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
मधेशी भनेर हेप्दै ‘एनि हाउ सरुवा गराइदिने’ चेतावनी दिएका असई 'झा' को साँच्चै सरुवा
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल भएको छ, जसमा एक युवतीले बर्दीमा रहेका प्रहरीलाई प्रहरी चौकीभित्रै थर्काएको सुनिन्छ । उनले एक असईलाई ‘एनि हाउ’ सरुवा गराइदिने चेतावनी दिएकी छन् ।
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो भाइरल भएको छ, जसमा एक युवतीले बर्दीमा रहेका प्रहरीलाई प्रहरी चौकीभित्रै थर्काएको सुनिन्छ । उनले एक असईलाई ‘एनि हाउ’ सरुवा गराइदिने चेतावनी दिएकी छन् । र, ती असईको साँच्चिकै सरुवा भएको छ ।
घटना झण्डै एक महिनाअघिको हो । थर्काउने अभियन्ता हुन् ज्वाला संग्रौला । सामाजिक सञ्जालमा चर्का स्टाटस लेखेर ‘भाइरल गर्ल’ का रूपमा चिनिएकी उनी अहिले विभिन्न स्थानमा राहत वितरणमा व्यस्त छिन् । राहत बाँड्न जाने सिलसिलामा महाराजगञ्जमा उनको प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) मणिकान्त झासँग लफडा भएको थियो ।
त्यसबेला ड्युटीमा रहेका झा उक्त घटना भएको एक साता नवित्दै महाराजगञ्जबाट महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रामशाहपथमा सरुवा भएका छन् ।
घटनालगत्तै साँच्चै दबाबमा सरुवा गरिएको हो ? भन्ने प्रश्नमा इन्सपेक्टर श्रेष्ठले त्यसलाई नकारे । नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत नै सरुवा भएको उनको जवाफ छ । तर, झा सो वृत्तमा आएको करिब ६ महिनामात्रै भएको थियो ।
श्रेष्ठ भन्छन्, ‘म पनि सरुवा भएर आएको धेरै भएको छैन । एक महिना जति मात्र भयो । मलाई त नियमति सरुवा नै होला भन्ने लागेको छ । विस्तृत रूपमा बुझ्न पाएको छैन ।’
ट्राफिक प्रहरी वृत्त महाराजगञ्ज स्रोतका अनुसार झा कोटेश्वरबाट महाराजगञ्जमा सरुवा भएर आएको करिव ६ महिनामात्र पुगेको थियो । उनको कार्यसम्पादन राम्रो रहेको र इन्सपेक्टर रविन्द्रकुमार श्रेष्ठले पनि रुचाएको स्रोतको भनाइ छ ।
तर, घटना भएलगत्तै काजसरुवा भएको जानकारी महानगरीय ट्राफिक प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जलाई आयो । जानकारी पाएपछि इन्सपेक्टर श्रेष्ठले रोक्न पनि खोजेका थिए ।
‘तर माथिबाट दबाब आएको हो कि के हो, इन्स्पेक्टर सा’बको पनि केही लागेन,’ स्रोतले भन्यो ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जका इन्स्पेक्टर श्रेष्ठका अनुसार महाराजगञ्जमा प्रहरीले चेकिङका लागि उनी चढेको मोटरसाइकल रोकेपछि विवाद भएको हो ।
उनले घटना विवरण यसरी सुनाए :-
‘उहाँहरू राहत बाँड्नका लागि नुवाकोट हिँड्नुभएको थियो बाइकमा । उहाँहरूसँग सवारी पास थिएन । अरु कुनै परिचयपत्र पनि थिएन । लाइसेन्स समेत रहेनछ । केही कागजात नभेटेपछि ड्युटीमा खटिएका साथीहरूले बाइक होल्ड गर्नुभयो ।
बाटोमा रोकिएपछि उहाँहरू आवेशमा आउनुभयो । अहम्ताले पनि होला अलिकित बढी नै बोल्नुभयो । हामीले राहत बाँड्न पनि नपाउने ? भन्दै ड्युटीमा रहेका साथीहरुलाई दुर्व्यवहार पनि गर्नुभएछ । म पनि पछि त्यहाँ पुगेको थिएँ ।
उहाँहरूले ड्युटीमा भएका साथीहरूले आफूमाथि हातपात गर्नुभएको मलाई बताउनुभयो । तर, मैले राम्रोसँग अनुसन्धान गर्दा हातपात गरेको पाइनँ । उल्टै हाम्रो ड्युटीमा भएका साथीहरुमाथि नै दुर्व्यवहार गर्नुभएको छ ।
घटना हुँदा उहाँहरूले भिडियो पनि खिचिरहनुभएको रहेछ । तपाईंले त्यो सामाजिक सञ्जालमा रहेको भिडियो पनि देख्नुभयो होला । त्यसमा सबै कुरा स्पष्ट छ । हातपात भएको भए भिडियोमा देखिनुपर्ने हो । त्यो हामीलाई देखाए जुनसुकै कारवाही भोग्न पनि तयार छौ ।’
उनीहरूले बर्दीमा रहेका प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार गरेको भए किन कारवाही गर्नुभएन त ? भन्ने प्रश्नमा इन्स्पेक्टर श्रेष्ठ यसो भन्छन्ः-
‘जे हुनु भइहाल्यो । हामीले यसलाई त्यति ठूलो रूपमा लिएनौं । घटना भएको पनि करिव एक महिना पुग्न थालिसकेको छ । हामीले त त्यो घटना बिर्सिसकेका थियौं । यहाँहरूजस्तै पत्रकार साथीहरूले अहिले बुझ्न खोज्नुनुभएपछि सम्झिने हो । नभए हामी नियमित काममा खटिएका छौ । सानातिना घटना हुन्छन्, त्यसलाई हामी त्यति ठूलो रूपमा लिदैँनौ । यसलाई त्यति ठूलो विषय बनाइरहनुपर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ ।’
आक्रमक अभियन्ता, विनयी इन्सपेक्टर
प्रहरी चौकीभित्रै खिचिएको भिडियोमा ज्वालाको समूह र प्रहरीहरुबीच विवाद भएको देखिन्छ । इन्स्पेक्टर श्रेष्ठले भने विनम्र बन्दै सम्झाउने कोसिस गरेका छन् ।
‘ज्वाला संग्रौला को हो थाहा छ कि छैन ? नाम सुनेको छ ? सञ्जाल हेर्ने गरेको छ ? तपाईंको आईजीपीले सम्मान गर्ने मान्छे हो,’ एक युवक भन्छन् ।
अर्का व्यक्ति (सम्भवत: चालक) को स्वर सुनिन्छ, ‘मलाई कारवाही गर्नुस्, मैले -कागज) बोकेको थिइनँ । तर त्यसलाई पनि कारवाही गर्नुस् जसले मुख छोडेको छ । ड्यूटीमा बसेर त्यसरी मुख छाड्न पाइँदैन । मासाले भन्न पाइन्छ ?’
अर्को पुरुष स्वरले भन्छ, ‘यो ट्राफिकमा बसेर देशका लागि पाँच वटा राम्रो काम के गर्नुभयो ? किन जागिर खाएको ?’
प्रेस ज्याकेट लगाएको एक व्यक्ति पनि छन् । उनले कस्तो बेलामा भिडियो खिच्न पाइन्छ कस्तोमा पाइन्न भन्ने सिकाउने प्रयास गरेका छन् ।
असई झाले भने आफ्नो भिडियोको दुरुपयोग भयो भने साइबर क्राइमको कुरा गरेको प्रष्टीकरण दिन्छन् ।
ज्वाला भन्छिन्, ‘यस्तो मान्छे हामीलाई चाहिँदैन । उहाँलाई सरुवा एनि हाउ गराउँछौं । तपाईं यो एरियामा चाहिँदैन । अरु सब ठीक छ तपाईं चाहिँदैन । तपाईंलाई धेरै दिन बस्न दिँदैनौं ।’
विवाद साम्य पार्ने क्रममा इन्स्पेक्टरले ज्वालाको समूहसँग माफी मागेका छन् ।
‘आजको घटनामा जेजस्तो भयो, म इन्चार्जको हिसाबले प्रहरीबाट भएको गल्तीका लागि माफी माग्छु,’ उनले भनेका छन्, ‘मासाला भनेको जस्तो चाहिँ लाग्दैन ।’
ज्वालाले मुख छोड्ने प्रहरी अर्कै भएको बताउँछिन् ।
ज्वाला भन्छिन्, ‘मुख छोडेको हिसाबकिताब गर्नुपर्छ । मेरो पनि दाजुभाइ प्रहरीमा हुनुहुन्छ । हामीसँग लाइसेन्सको फोटोकपि छ, बिल बुक छ भन्दा म एक-एकलाई साइबर क्राइममा ठेगान लगाइदिन्छु भन्ने ?’
‘हामी भोकभोकै राहत बाड्ँन हिँडेका छौं । मलाई साइबर क्राइममा जेल हाल्दा देश बन्छ भने ५० वर्ष जेल हाल्नुस्’, उनले भनेकी छन् ।
अन्तिममा ज्वाला भन्छिन्, ‘उहाँलाई हामी यहाँ बस्नै दिँदैनौं, एनि हाउ सरुवा गर्छौैं ।’
अनि अर्का व्यक्तिले असइको नाम सोध्छन् । नाम मणिकान्त झा भनेपछि उनी भन्छन्, ‘झा जी रैछौ, उतै मधेसतिर जाउ अब । आफ्नै घरतिर सजिलो पनि हुन्छ । खेतिकिसानी गरेर खाउ ।
यो समाचार नेपाल प्रेस अनलाईनमा पत्रकार केशव भुलले लेखेका छन् ।
समाचारको अरिजनल लिँकः अभियन्ताले ‘एनि हाउ सरुवा गराइदिने’ चेतावनी दिएका असई साँच्चै सरुवा – Nepal Press